'अति भएपछी अर्को पार्टी खोल्ने निर्णय गर्‍यौं':-माधव नेपाल | The Mirror
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन गरिएपछि एमाले भित्रको विवाद चर्किएको छ। नेपाल समूहले विघटनको विरोध गर्दै विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिने घोषणा गरिसकेको छ।
यी सबै घटनाक्रमसँगै एमाले लगभग विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ। सो पार्टीका नेता नेपालले अर्को पार्टी खोल्ने निर्णयमा पुगेको समेत बताएका छन।
एक अन्तर्वार्तामा नेता नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धकेलेर पार्टी फुटाउन बाध्य परेको गुनासो पोखे। उनले भने, ‘केपी शर्मा ओलीले धकेलेर त्यतै पुर्‍याउँदै हुनुहुन्छ , अर्को पार्टी खोल्न बाध्य पार्दै हुनुहुन्छ ’।
ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी दुवै लडाइँमा जाने माधब नेपाल निकट स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गरेको छ। उनले भने, ‘हाम्रो आज (शनिबार) पनि बैठक बसेको थियो, उहाँको अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेका छौं’ ।
पार्टी एकताका लागि गठन भएको कार्यदलको बारेमा उनले आक्रोशित हुदै भने, ‘त्यो कार्यदलको औचित्य उहाँले सिध्याइ दिनुभयो , यत्रो कार्यदल बनेको छ, सरसल्लाह गर्नुपर्दैन ? सोध्दै नसोधी संसद् विघटन गर्ने ? केही सल्लाह गर्नुपर्दैन ? अध्यादेश ल्याउनुअघि केही सल्लाह गर्नुपर्दैन ?
Tagged madhav nepaluml